Hoolka Tiyaatarka ee Scoula Polizia oo lagu qaban doono doorashada Madaxweynaha – idalenews.com
Maalinta Berito ah oo ay bisha September tahay 10ka ayaa loo balamey in ay dhacdo doorashada Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya. Prof Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari oo saxaafada la hadley ayaa ku wargeliyey dhamaan Xildhibaanada iney isugu yimaadaan Garoonka Aadan Cade International saacadu markey tahay 6:30 subaxnimo halkaas la filaayo in xildhibaanada looga soo qaadi doono basas gaar ah oo ilaa xarunta Dugsiga Sare ee Booliiska Xamar (Scoula Polizia) keena .
Hoolka Shirarka ama Tiyaatarka ee Xarunta Dugsiga Sare ee Booliiska (Scoula Polizia) ayaa la sheegey in diyaargarow aad u weyn uu ka socda iyadoo sidoo kale ammaanka guud ahaan hoolka doorashadu ka dhaceyso iyo agagaarkiisa si aad ah loo adkeeyey.
Doorashada Madaxweynaha Soomaaliya ayaa 42 sano ka dib si rasmi ah uga dhaceysa meel ka mid ah dalka Soomaaliya, taasoo rajo galisey dadka Soomaaliyeed in ay markaan helaan dowlad wax xoogaa ka duwan kuwii hore, isla markaasna ummadda Soomaaliyeed ku hogaamisa cadaalad iyo dowlad wanaagsan. Beesha caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed ay indha ku wada haya natiijada doorashada maalinta berito dhaceysa iyo qofka nasiibka u yeesha inuu hogaamiyo dalka 4ta sano ee soo socota, kaasoo looga fadhiyo inuu dalka u diyaariyo doorashooyin xor ah oo dadku iskood u doortaan cida ay rabaan, lagana gudbo wax qeybsiga qabiilka ee ay Somalia la degay 21kii sano ee fowdada, nin jecleysa iyo laaluushka dalku ku jirey.
Xafiiska Warqabadka Idale News Muqdish
Dhageyso Prof Jawaari oo rajo ka muujiyey in doorashada Madaxweynaha Somalia si cadaalad ah u dhacdo